Kulankii Madaxwayne Siilaanyo Iyo Kelmadihii Aan Boobay! By M. Haaruun | Araweelo News Network (Archive) -
Kulankii Madaxwayne Siilaanyo Iyo Kelmadihii Aan Boobay! By M. Haaruun
Ma maqli jirteen cabashooyin ah, “Madaxwayne Siilaanyo iyo shacabkiisa dad muraad leh baa u dhexeeya?” Wixii la sheegoba wax uun baa ka jira. Eedayntaas oo nool aniga ayaa u soo joogay. Shir dhan, oo guulwadayn iyo hees walwaaleed keliya laga qaadaayo, oo dadwaynihii
in hal qof ka hadlo la diiday baan tagay, kadibna hadalkii baan boobay. Oo maxaan u boobay, ma jirin waddo kale oo ii furnayd. Wax kastaaba way dhacaan ee bal ila wadaaga siday wax u dhaceen!
Xalay (13 Feb, 2013), waxan ka qayb galay kulan loo qabtay Madaxwaynaha Somaliland, Mudane Siilaanyo iyo xubno door ah oo la socday. Laba maalmood ka hor ayaa loo sheegay dadka in 7:00 fiidnimo waqtiga London, Hotel Sheriton Madaxwaynuhu dad kooban oo labaatan aan ka badnayn kula kulmayo, tallona waydiinayo. Arrintii sidii umma dhicin ee dad ka badan labaatankii, iyo warbaahinta oo aan la filayn ayaa yimi goobta. Waftiga Madaxwaynaha oo aad u soo daahay baa soo galay, iyadoo markaa wakhtigii hotelka la kiraystayba uu gabaabsi ku dhawyahay, wax cudurdaar ahna ma bixinin wefdigu. Madashaa goob-joog baan ka ahaa.
Waa laga gudbay, ninkii Mr Xariir wuxu hadalkii siiyay dhawr qof oo si foolxun u guulwadeeyay. Isaga qudhiisu guulwadaynta dhinac buu ka waday oo mar kasta oo fursad uu u heloba hadal guulwadayn ah buu sheegaayay. Hadalkii hadana wuxu siiyay nin lagu magacaabay Maxamed Yoonis oo la ii sheegay inuu Wasiir ku xigeen mar ka ahaa Wasaaradda Khaarajiga. Mr Yoonis, oo sababtu waxay ahaydba, codka hadalkiisa oohin laga dareemaayay bilawgii, ayaa hadalkii cabaar haystay. Isaga iyo Xariir oo hadalka u dhiibayba waxay si badheedh ah u sheeg-sheegeen hadal laga wada dhadhansaday durid Xassan Ciise loola jeedo. Dadka badankoodu hadalkaas ma jeclaysan, qaar u sacabiyayna waa jireen. Mr Yoonis weerarkii uu Xassan Ciise ku qaaday waxa u raacaayay amaan uu u jeediyay Wasiiro dawladda ka mid ah sida Wasiir ka madaxtooyada (Xirsi), Khaarajiga, (Cumar), iyo Madaxwaynahaba. Maan moodaynin Reer-Somaliland inay Guulwadayntu heerkaas ka gaadhay. Waan yaabay dhab ahaan. Hadmaa dadkii sidan u doorsoomay? Baan hoos isu waydiiyay. Mr Yoonis wuxu malaha ka dareen qabay in nimankaas Wasiirada ah dhaliilo badan had iyo jeer loo jeediyo, waxaanu isku dayayay qiyaastaydii, inuu daafaco, waan se hubaa inaanu halna u tarin.
Intaa kadib, Wasiiro, xildhibaano, iyo nin la ii sheegay inuu Xeer-ilaaliyaha Somaliland yahay ayaa iska wada daba hadlay, dhamaantoodna hal waddo ayay haysteen. Way cawdeen dhamaantood, waxaanay sheegeen in maamulka dhaliilo uun loo jeediyo, oo waxay qabtaanba aan indho loo lahayn. Mid kastaaba hadal noocaas ah oo cabasho ay saldhig u tahay ayuu madasha ka jeediyay.
Xildhibaan magaciisa lagu sheegay Cali-mareexaan, oo sidaan dareemaayay, ugu aftahansanaa ayaa sheegay inay malaha ciladdu tahay iyaka (dawladda) oo aan si wacan wax-qabadkooda u sheeg-sheegi aqoonin. Wasiir Geeljire oo hadlay isagu wax kaleba kama hadlin ee Xildhibaankii ka horeeyay (Cali-mareexaan) ayuu ka daba tagay warkiisii, waxaanu tilmaamay inay sheegi yaqaaniin waxooda, laakiin aanay cidi dhagaysanaynin. Riwaayad uu sheegay in waa hore la dhigay, oo Sooraan uu jilaa ka ahaa buu noo soo qaatay, riwaayad se cidi uma fadhiyin. Isku soo wada duuboo, aniga malahayga, kooxdii Siilaanyo hortiis shirka ka hadashay, ee dadka caajisiyay dhamaantood wax macno leh kama hadlin.
Kolkii ay xaajo halkaa maraysay, Madaxwaynihiina hadlay, wakhtigii shirkuna gabagabo ku dhawyahay, dadkiina niyad jabsanyihiin oo aanu hal qof dareemadii bulshada iyo waayihii taagnaa ka hadlin, ayaan anigu qof ahaan go’aansaday inaan hadlo fasax la’aan. Waan u badheedhay taas dhab ahaan, maxaa yeelay jid kale oo ii furaniba ma jirin. Masaafo gaadhaysa 200 mayl anigu uma soo soconin inaan hadallo iska faaruq ah iyo guulwadayn soo dhagaysto. Waxan u imid, dadka badankooduna u yimaadeen, inay dareenkooda dhabta ah cabiraan hadayba Madaxwaynihii fursad u heleen. Waxay u yimaadeen, inay Madaxwaynaha ugu hambalyeeyaan wixii u qabsoomay, wixii ka qaloocdayna u tilmaamaan. Waxay kooxdii shirka wadday ii soo direen nin ka mid ah iyaka oo iga codsaday inaanan hadlin, laakiin ma yeelin. Hadal dhib leh ba maan u soconin, waxaanan fahmi waayay sababta aan loo doonaynin inay cidiba afka furto. Waa yaab saw maaha?
Annigu kolkii aan istaagay, ee hadalka bilaabay, salaan kadib, waxan madaxwaynaha ku hambalyeeyay darajooyinkii ciidamada ee dhawaan uu bilaabay. Waxan sheegay, oo saxna ah, inay arintaasi ahayd mid dhinaca saxda ah loo qaaday, labaatan sanona ay sabab la’aan u taagnayd. Waxan sheegay in sababta arintaas loo dhaqaajin waayay ay karti daro, iyo asbaabo kale oo liita, oo ay ka mid tahay qabiilkee darajooyinka la bixiyo badsan doona, iyo kee yaraysan doona darteed ahayd. Waxan sheegay, ilayn inaan guulwadeeyo isuma taagine, in Somaliland ay cilad wayni haysato, ciladaasuna ay tahay inaan wixii qaldan la isu sheegin.
Waxan sheegay, in kooxdaas isaga la socota oo dhami ay ku dadaalayaan inaan dadka shirka joogaa wax hadal ah odhanin. Waxan sheegay inay dadkani dalka la leeyihiin, sidiisa oo kalena lexejeclo wadanka ka hayso. Waxan sheegay dhaliil sheegistu inay ummadaha dhisto, dhaliil sheegis la’aantana lagu dumo, oo tii Maxamed Siyaad ee isagu (Madaxwaynuhu) uu goobjooga u ahaaba ay sidaas ku duntay.
Waxan sheegay in dhibaatooyinka dawladiisa haysta ay ugu wayntahay, siday aniga ila ahayd, gaabisnimadda Wasaaradda Khaarajiga. Waxan sheegay, oo shirkana keenay, oo qaybo ka mid ahna meesha ka akhriyay, waraaq Ingiriisi ah, oo uu Wasiir Khaarajigiisu dhawaan (January 29, 2013) qoray. Waraaqdu waxay sheegtay inay Somaliland ku ‘fashilantay’ inay kashifto wax cadayn ah oo taageeraaya talooyinkii dhinaca amniga ee dhawaan dawladda ingiriisku bixisay.
Kalmadda “Fashilka, failure” oo Wasiirku uu adeegsaday ayaa hadalkiisa micnihii uu ka watay mooyee mid kale u yeeshay, foolxumo dhacday baanay ahayd. Kolkaan halkaas maraayay, ayaa la igu shimbiro-waaqleeyay, shirkiina qasmay. Inyar oo doonaysay inaanan hadalka sii wadin, iyo in badan oo lahayd wad hadalka ayaa loo qaybsamay, labada kooxoodna way qaylinaayeen. Waxba se igama galin “Kol hadaan ka gabyay, go’aygiina ka qaatay.” Waa halkii Nuur-laangadhee. Waxan ka xumahay inay iga dhex galeen talada qaybtii ku saabsanayd Xassan Ciisaha ay meesha hadalada u marinaayeen, oo aan jeclaa inaan ku idhaaho, Mr Madaxwayne, kolka aad Hargeysa ku noqoto, ninkaas Xassan ah adigu qof ahaan baabuurkaaga qaado oo gurigiisa ugu tag, arintana xalkeeda doon oo warbaahinta fariimo ha u marinin, cidna ha u dirin. Laakiin mabay igu simin guulwadayaashii meesha bash-bash lahaa.
Sidaa oo ay tahay, waxan horey u maqlay, in dad waxgarad ah, oo Madaxwaynaha ehelkiisa ahi ay talo mar ugu tageen, una sheegeen inuu Wasiirkiisa Xirsi iska fogeeyo sababo dantiisa iyo midda qarankuba ku jirto, waxaanan maqlay inuu soo diiday. Tii waagaas iyo middan caawa ayaan isu geeyay. sidoo kale waxaan xasuustay Waraaq aan mar akhriyay, oo talo qiimo gal ahi ku qornayd, oo qoraaga Maxamed Baashe uu ayaamihii Madaxwayne Silanyo la doortay hawada u mariyay. Waraaqdaasi qodobadii badnaa ee ay xambaarsanayd waxa ka mid ahaa mid Madaxwaynaha xasuusinaayay inuu waagii Qaaxo (ayaamihii SNM ta) rakaab (asxaab) aan wacnayn isku xeeri jiray, ayna tahay inuu dhaqankaas markan bedelo kol haddii aanay meeshu jabhadnimo ahayn, oo ay qaranimo tahay. Waxyaalahaas kolkaan isu geeyay, waxan is leeyahay Wasiir Khaarajigu wuxu haystaa bii’ad u saamaxaysa inuu wixiisii iska walaaqdo, oo talada umadda hadba gidaar kula dhaco.